9. september 2020 - NorSom News
Kommune lagu canaantay dacwo ay masaajid ka gudbiyeen.
Norsomnews - 9. september 2020 0
Duqa magaalada Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje ayaa shir jaraa´id oo uu shaley qabtay ku sheegay inay dacwo ka gudbiyeen masaajid kuyaal magaaladaas, kadib markii xaflad...
Norway: 185 agaasime iyo agaasime waaxeed, 1 qof ayaa ajnabi ah.
18,2 % bulshada ku dhaqan Norway, waa dad ajaaniib ah oo iyaga oo waaweyn Norway yimid ama caruur ay wadanka ku dhaleen. Saas oo ay...
Sweden oo wixii lagu wada qoslaba, hada kaligeed qosleysa.
Isbuucyadii ugu danbeeyay waxaa dalalka Woqooyiga Yurub laga dareemayaa sare u kac xoogan oo ku yimid tirada dadka uu ku dhacay xanuunka Coronavirus oo...
SV oo mar kale xildhibaan Maryan Xuseen u sharaxay xubinimo baarlamaan.
Waxaa xalay fiidkii soo baxay liiska musharaxiinta baarlamaanka ee xisbiga SV, gaar ahaan laantiisa Oslo ay u xusheen inay sanadka danbe uga tartamaan magaalada...